यशैया 51 ERV-NE - इस्राएल - Bible Gateway
इस्राएल अब्राहाम जस्तो हुनु पर्दछ
51 “तिमीहरू कतिपय असल जीवन जीउनलाई एकदमै कोशीश गर्छौ। तिमीहरू यसको लागि परमप्रभुको सहयोग माग्न जान्छौ। मलाई ध्यान दिएर सुन। तिमीहरूले आफ्ना पिता अब्राहामलाई हेर्नु पर्छ। उनी एक चट्टान हुन जसको टुक्रा तिमीहरू होऊ।2अब्राहाम तिमीहरूका पिता हुन् अनि तिमीहरूले उनलाई खोज्नु पर्छ। तिमीहरूले सारालाई हेर एक नारी जसले तिमीहरूलाई जन्म दिईन्। अब्राहाम मैले बोलाउँदा एक्लै थियो। त्यसपछि मैले उसलाई आशीर्वाद दिएँ अनि उसले एउटा ठूलो परिवार प्रारम्भ गर्यो। धेरै-धेरै मानिसहरू उसबाट नै जन्मिए।”
3 यस्तै प्रकारले परमप्रभुले सियोनलाई सान्त्वना दिनुहुनेछ। परमप्रभुले उनी र उनको सन्तानहरू प्रति दु:ख अनुभव गर्नुहुनेछ अनि उहाँले उसको लागि एक महान कार्य गर्नुहुनेछ। परमप्रभुले मरुभूमिलाई परिवर्तन गर्नु हुनेछ। त्यो मरुभूमि अदनको बगैंचा जस्तो हुनेछ। त्यो जग्गा रित्तो थियो, तर त्यो परमप्रभुको बगैंचा जस्तो हुनेछ। मानिसहरू त्यहाँ अति नै खुशी हुनेछन्। मानिसहरूले त्यहाँ आनन्द प्रकट गर्नेछन्। तिनीहरूले धन्यवाद र विजयको गीत गाउँनेछन्।
4 “मेरा मानिसहरू, मलाई ध्यान दिएर सुन।
मेरो निर्णयहरू कसरी जीउनु भनरे मानिसहरूलाई देखाउँदै ज्योति जस्ता हुनेछन्।
5 म निष्पक्ष छु भनेर चाँडै नै देखाउनेछु।
म चाँडै नै तिमीहरूलाई बचाउनेछु म आफ्नो शक्ति लाएर सारा जातिहरूमा न्याय गर्नेछु
सबै सुदूरका ठाउँहरूले मलाई पर्खिरहेकाछन्।
तिनीहरूले आफ्ना मद्दतकोलागि मेरो शक्तिको प्रतीक्षा गर्दछन्।
6 माथि आकाशमा हेर!
तल पृथ्वी वरिपरि हेर!
आकाश बादलहरूका धूँवा सरह अल्गिदै जानेछ।
पृथ्वी काम नलाग्ने पुरानो लुगा सरह हुनेछ।
पृथ्वीमा भएका मानिसहरू मर्नेछन्
तर मेरो उद्धार सदा-सर्वदा रहिरहनेछ।
मेरो सद्भावना कहिल्यै अन्त हुनेछैन।
7 तिमीहरू जसले मेरो धार्मिकतालाई जान्दछौ त्यसले मलाई ध्यान दिएर सुन्नु पर्छ।
तिमीहरू जसले मेरो उपदेशहरू मान्दछौ उनीहरूले मैले भनेका कुराहरू मान्नु पर्दछ।
दुष्ट मानिसहरूबाट नडराऊ।
तिनीहरूले तिमीहरूलाई भनेका नराम्रा कुराहरूबाट नडराऊ।
8 किनभने तिनीहरू पुराना लुगाहरू जस्ता हुन्।
माऊ कीराहरूले तिनीहरूलाई खानेछन्।
तिनीहरू ऊन जस्तो हुन् कीराहरूले तिनीहरूलाई खानेछन
तर मेरो सद्भावना सदा-सर्वदा चलिरहनेछ।
मेरो उद्धार सदा-सर्वदा लगातार चलिरहनेछ।”
परमेश्वरको शक्तिले आफ्ना मानिसहरूलाई बचाउँनेछ
9 जाग! जाग!
हे परमप्रभुको बाहु, बलवान बन्।
आफ्नो बल चलाऊ जसरी तिमीहरूले धेरै अघि गरेका थियौ।
जसरी तिमीहरूले प्राचीन कालमा गरेका थियौ।
तिमीहरूसँग राहाबलाई पराजित गरेको त्यो शक्ति छ।
तिमीहरूले अजीङ्गरलाई पराजित गर्यौ।
10 तिमीहरूले गर्दा नै समुद्रलाई सुख्खा हुने पार्यौ।
तिमीहरूले अति गहिरोबाट पानी सुकायौ।
तिमीहरूले समुद्रको गहिरो भागमा बाटो बनायौ।
तिमीहरूले त्यो बाटो पार गरेर बाँच्यौ।
11 परमप्रभुले उहाँका मानिसहरूलाई बचाउनु हुन्छ।
तिनीहरू आनन्दित भएर सियोन फर्किनेछन्।
तिनीहरू अत्यन्त खुशी हुनेछन्।
तिनीहरूका खुशीयाली तिनीहरूको शिरको एउटा मुकुट सरह सदा-सर्वदा रहने छ।
तिनीहरूले खुशीसँग गाउनेछन्
सबै दु:खद अवस्थाहरू टाढा हटेर जानेछ।
12 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “म मात्रै हुँ तिमीहरूलाई सान्त्वना दिने।
यसैले तिमीहरू किन मानिसहरूसँग डराउँछौ?
तिनीहरू मानिसहरू मात्र हुन् जो घाँस जस्तै मर्दछन्।”
13 परमप्रभुले तिमीहरूलाई बनाउनु भएको हो।
उहाँको आफ्नो शक्तिले पृथ्वी बनाउनु भयो।
अनि उहाँको आफ्नो शक्तिले पृथ्वी भरि आकाश फैलाउनु भयो।
तर तिमीहरूले उहाँलाई भुल्यौ र उहाँको शक्तिलाई पनि भुल्यौ।
यसकारण तिमीहरू क्रोधित मानिससँग डराउँछौ,
जसले तिमीहरूलाई चोट पुर्याउँछ।
ती मानिसहरूले तिमीहरूलाई नाश गर्ने योजना बनाए
तर तिनीहरू सबै गए तिनीहरू अब कहाँ छन्।
14 कैदमा परेका मानिसहरू चाँडै नै स्वतन्त्र हुनेछन्।
ती मानिसहरू झ्यालखानमा मर्ने अथवा सड्ने छैनन्।
ती मानिसहरूले प्रशस्त खानेकुराहरू पाउनेछन्।
15 “किनकि म, परमप्रभु, तेरो परमेश्वर हुँ।
म समुद्रलाई उत्तेजित पारी उठाउनेछु र छालहरू उठाउनेछु।”
(सेनाहरूका परमप्रभु उहाँको नाउँ हो।)
16 “मेरो दास, म तिमीहरूलाई ती वचनहरू दिने छु जुन म तिमीहरूलाई भन्न चाहन्छु। अनि म तिमीहरूलाई मेरो हातले छेक्नेछु र म तिमीहरूलाई बचाउनेछु। म तिमीहरूलाई नयाँ आकाश अनि नयाँ पृथ्वी बनाउनलाई चलाउनेछु। म तिमीहरूलाई चलाउनेछु इस्राएललाई यसो भन्नलाई, ‘तिमीहरू मेरा मानिसहरू हौ।’”
परमेश्वरले इस्राएललाई दण्ड दिनुभयो
17 जाग जाग!
परमप्रभु तिमीहरूमाथि अति क्रोधीत हुनु हुन्थ्यो।
यसैकारण तिमीहरू दण्डित भयौ।
यो दण्ड एक कचौरा विष जस्तो थियो, तिमीहरूले पीउनु नै पर्थ्यो,
अनि तिमीहरूले यसलाई पियौ।
18 यरूशलेमसँग धेरै मानिसहरू थिए, तर तिनीहरू मध्ये कोही पनि यरूशलेमको अगुवा हुन सकेन्। तिनले उठाएका कुनै पनि छोरा छोरीहरूले उनलाई डोर्याएनन्। 19 कष्टहरू दुइ वर्गमा यरूशलेममा देखापरे, चोरी र सीमित खाद्यन्न, ठूलो अनिकाल र युद्ध।
तिमीहरू दु:खमा परेको बेला कसैले पनि तिमीलाई साथ दिएन्। कसैले पनि तिमीहरू प्रति करूणा देखाएन्। 20 तिमीहरूका मानिसहरू कमजोर भए तिनीहरू भूईंमा लडेर त्यही पल्टिरहे। ती मानिसहरू प्रत्येक कुना काप्चा र गल्लीहरूमा लडिरहे। तिनीहरू पाशोमा परेका पशुहरू जस्ता भए। जब सम्म तिमीहरूले दण्ड थाम्न नक्सने भयो परमप्रभुको क्रोधवाट दण्डित भइरह्यौ। जब परमेश्वरले अधिक दण्ड दिन्छु भनेर भन्नुभयो, तिनीहरू सातो हराएका झैं भए।
21 मलाई ध्यान देऊ, दु:खी यरूशलेम। तिमीहरू दाखरस नपिएता पनि एउटा मद पिउने मानिस जस्तै कमजोर छौ। तिमीहरू त्यस, “विषको कचौराबाट” कमजोर छौ।
22 तिमीहरूका परमेश्वर र मालिक, परमप्रभु, आफ्ना मानिसहरूका लागि लड्नु हुन्छ उहाँले तिमीहरूलाई भन्नु हुन्छ, “हेर, म यस विषको कचौरालाई तिमीहरूबाट टाढा हटाइरहेछु। म मेरो क्रोध तिमीहरूबाट टाढा लागिरहेछु। मेरो क्रोधको कारणले अब उप्रान्त तिमीहरू दण्डित हुने छैनौ। 23 म मेरो क्रोध तिनीहरूमाथि प्रयोग गर्नेछु जसले तिमीहरूलाई चोट पुर्याउनेछ, जसले तिमीहरूलाई मार्ने प्रयास गर्दछ। तिनीहरूले तिमीहरूलाई भने, ‘हाम्रो अघाडी घुँडा टेक अनि हामी तिमीहरूमाथि हिंड्नेछौं।’ तिनीहरूले जबरजस्ती तिनीहरूलाई झुकाउने कोशिश गर्छन्। अनि तिनीहरू तिमीहरूका ढाढमा हिंड्नेछन्। तिमीहरू तिनीहरू हिंड्ने एक बाटो जस्तो हुनेछौ।”